fanontaniana 748 panel / VC
2 taona 1 volana lasa izay #104 by Gh0stRider203
Aho ary nijery ny manodidina aloha aho mbola hahita mendrika freeware tontonana na virtoaly cockpit fa afaka nataony tao amin'ny 748F izay manidina (i Mila mitady ny rohy tatỳ aoriana LOL).
ny anankiray aho mampiasa ny toerana misy anao 747 tontonana izay Hey na inona na inona, dia miasa ... fa raha ny marina aho te-hahita mendrika VC. Marina fa I mazàna nanidina teo 2d tontonana, fa eh! VC dia tsara izao, ary avy eo ho an'ny rehefa nahazo fiposahan'ny masoandro na ny masoandro mody tsara miandry anareo amin'ny hoavy
2 taona 1 volana lasa izay #112 by aputech
Gh0st, jereo ny Ken Wigginton ny cockpits. Nanana olana toy izany koa, tsara kokoa te 2D / VC cockpit, ary maro be ny nanao tsara fanahy, ny zava-drehetra ho an'ny Boeing sy Airbus mitovy.
2 taona 1 volana lasa izay #116 by Gh0stRider203
Aho hijery izany .... misaotra.
Fotoana mamorona pejy: 0.183 segondra